चार दिन भयो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना के भइरहेको छ? – MySansar
चार दिन भयो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना के भइरहेको छ?
Posted on May 18, 2017 May 19, 2017 by Salokya
वैशाख ३१ गते आइतबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान।
वैशाख ३१ गते आइतबार राति मतगणना भएन। राति ८ बजे बल्ल ३२ वटै वडाका मतपेटिका गणनास्थल सभागृह ल्याइपुर्‍याइयो। राति नै मतगणना गर्नुपर्नेमा सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन। भोलिपल्ट मात्र मतगणना गर्ने निर्वाचन अधिकृतले भनेपछि केहीले सभागृह बाहिर आजै मतदान गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरे।
जेठ १ गते सोमबार बिहान ८ बजे सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गर्ने भनिए पनि बैठक बस्न ढिला भयो। १२ बजेपछि बल्ल वडा नम्बर १ को मतपेटिका खोलेर गन्न थालियो। विद्यासुन्दर शाक्यको सुरुवाती अग्रता। किशोर थापा र रञ्जु दर्शनाको मत उल्लेखनीय। एक ठाउँमा मात्र मतगणना। थोरै मत गन्दाको परिणामलाई आधार मानेर भारी विश्लेषणहरु सुरु।
जेठ २ गते मंगलबार मतगणना जारी। वडा नम्बर ३२ को पनि गन्न थालियो। दुई ठाउँमा मतगणना।
जेठ ३ गते बुधबार वडा नम्बर १ को मतपरिणाम आयो। एमाले विजयी। वडा नम्बर २, ३ र ३२ को गणना थालियो। ११ ठाउँमा ११ वडाको गन्ने तयारी भयो। राति १० बजेसम्म कूल ५९३६ मत गनियो। खसेको झण्डै दुई लाख मत। साँझ ६ बजेदेखि वडा नं २ देखि ४ सम्म र २५ देखि ३२ सम्मका वडाका मतपत्रहरुको गणना ११ ठाउँमा भयो। राति १० बजेसम्मको परिणाम एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य २२५२, नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशी ११८०,विवेकशील नेपाली दलका रञ्जु न्यौपाने ८९२, साझा पार्टीका किशोर थापा ६४१ मत। उपप्रमुखमा काँग्रेसकी हरिप्रभा खड्गीले १५५४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजाराम श्रेष्ठले १२५८ मत।
जेठ ४ गते बिहीबार गणना जारी। ११ ठाउँमा गणना भएकोले आज कम्तिमा वडा २ र ३२ को परिणाम आउने आशा।
जेठ ४ गते बिहीबार राति १० बजेसम्म : वडा २ अध्यक्षमा एमाले विजयी भएको अनौपचारिक जानकारी आए पनि औपचारिक घोषणा हुन सकेन। १९ हजार ७३८ मतगणना भयो। अर्थात् आज १३ हजार ८ सय मत गनियो। प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य छ हजार ६४८। नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशी चार हजार २२७ मत। विवेकशील नेपाली दलका रञ्जु न्यौपाने दुई हजार ७५६ मत। साझा पार्टीका किशोर थापा एक हजार १९९ मत। उपप्रमुखमा काँग्रेसकी हरिप्रभा खड्गीले पाँच हजार ६८७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजाराम श्रेष्ठले तीन हजार ७३८ मत।